မောင်လေးနဲ့အတူ – စ\_ဆုံ | Myanmar Incest Book မောင်လေးနဲ့အတူ – စ\_ဆုံ – Myanmar Incest Book
Myanmar Incest Book
Read Myanmar Incest Book
မောင်လေးနဲ့အတူ – စ\_ဆုံ
မောင်လေးနဲ့အတူ – စ\_ဆုံး
အာကာမင်း ရေးသား၍ တိတ်တခိုး မှ ကူးယူသည်။
#SawMon မျှဝေသည်။ အင်းစက်စာပေဖြစ်ပါသည်။
သံလွင်ဖြူအနေနဲ့ သူမ၏မောင်ဖြစ်သူ မင်းခန့်ကိုတွေ့ရသည်နှင့်တပြိုင်နက် အားကိုးတကြီးဖြင့် မင်းခန့်၏ခန္ဓာကိုယိကို တင်းကျပ်စွာပွေ့ဖက်ထားလိုက်ရင်း မျက်ရည်များလည်း စီး ကျလာခဲ့သည်။ သူမ၏မိဘနှစ်ပါးမှာ တရားဝင်ကွာရှင်းထား ကြပြီး သူမကအဖေနဲ့အတူ ရန်ကုန်တွင်နေခဲ့ရပြီး မင်းခန့်က တော့ အမေနဲ့အတူ အိုင်ယာလန်နိုင်ငံဆီသို့ လိုက်ပါသွားခဲ့ရ သည်။ သူမ၏မောင်လေးဖြစ်သောမင်းခန့်က ငိုရှိုက်နေသော သူမ၏ကျောပြင်အပေါ်သို့ သူ၏လက်ဖဝါးဖြင့် ငြင်သာစွာ ပွတ်သပ်ပေးရင်း ချော့မော့နေသည်။ သူမတို့မောင်နှမမှာ သူမ က လေးနှစ်ပိုကြီးနေသော်လည်း ယခုမူ မင်းခန့်ကအကြီးပမာ ပြုမူနေသော်လည်း မင်းခန့်အသက်က ယခုမှ ၁၈ နှစ်သာ ရှိ နေသေးသည်။ မင်းခန့်မှာ အသက်ကသာငယ်နေသော်လည်း သူမအပေါ်ကာကွယ်ပေးချင်သောစိတ်နှင့် ချော့မောနေသည် ကို သူမအနေနှင့်မငြင်းဆန်နိုင်သည်အ့ပြင် ထိုအခြေအနေ အပေါ်မှာပင် သာယာနေမိသလိုဖြစ်နေသည်။ မင်းခန့်က သူမ တို့ဆီကို လွန်ခဲ့သော ၃ နှစ်ခန့်က တခေါက်လာခဲ့ဖူးသော် လည်း အမေကတော့ တခါမှပြန်မလာခဲ့ပေ။ သူမက
“ကဲ အခု နင်ဘာလုပ်ဖို့ အစီအစဉ်ဆွဲထားလဲမင်းခန့်”
ဟု မေးလိုက်သည်။ မင်းခန့်က
ဒါပေမယ့် အဖေကတော့ ငါ့ကိုခွင့်မပြုလောက်ဘူး”
ဟု ဆင်ခြင်ပေးလိုက်သည်။ မင်းခန့်က သူမ၏ဆင်ခြေကို မနှစ်မြို့ဟန်ဖြင့်
ဟု ပြောလာသည်။ အမေက အဖေ့အပေါ်နာကျည်းမှုဖြင့် မင်း ခန့်အပေါ်တွင် သူမရဲ့ခံစားချက်မျိုးကို အပီအပြင်ရိုက်သွင်း ခဲ့သည်ဟု သူမထင်မိသည်။ ထို့ကြောင့် သူမက
ဟုပြောပြီး မင်းခန့်ယူလာသော အဝတ်အစားအိတ်နှစ်အိတ်အ နက် သေးငယ်သောအိတ်ကို ကောက်ယူပြီး ကားရပ်ထားသော နေရာသို့ ဦးဆောင်၍လျှောက်လာခဲ့သည်။ မင်းခန့်က ကျန်နေ သောအိတ်ကိုဆွဲပြီး သူမအနောက်ကနေ ထပ်ချပ်မကွာ လိုက် လာလေသည်။
ကားဆီသို့ရောက်သောအခါ ကား၏အနောက်ဖုံးကိုဖွင့်ပြီး သူ မယူလာသောအိတ်ကိုထည့်နေစဉ် မင်းခန့်က သူမ၏လည် ဂုတ်သားဖွေးဖွေးလေးအပေါ်သို့ သွားဖြင့်ဖွဖွလေး ကိုက်လိုက် သဖြင့် ရုတ်တရက်ဖြစ်သောကြောင့် လန့်ပြီး သူမတကိုယ်လုံး တုန်သွားရလေသည်။ သူမ၏ ကားစွင့်နေသော တင်ပါးနှစ်ခု ကြား မာမာအချောင်းကြီးတခုက လာထောက်နေသဖြင့် သူမ အနေနဲ့ စိတ်လှုပ်ရှားနေရသည်။ သို့သော် သူမ၏မသိစိတ်က လက်ခံနေသော ထိုခံစားချက်ကို သူမ၏ဦးနှောက်ထဲက မောင်နှမဟူသော အသ်ိစိတ်ဖြင့် ခက်ခဲစွာငြင်းဆန်ခဲ့ပြီး
“ကဲ ဒီအရွယ်ကြီကို သွေးစုတ်ဖုတ်ကောင်လုပ်တမ်း ကစားနေတာလား”
ဟု ဟန်ဆောင်ရယ်ရင်းမေးလိုက်သဖြင့် သူက
ဟု ပြန်မေးလာသည်။ သူမက
ဟု ပြောပြီး ကားမောင်းသူထိုင်သောနေရာဆိသို့ လျှောက် လာပြီး တံခါးကိုဖွင့်ကာ ဝင်ထိုင်လိုက်သဖြင့် မင်းခန့်လည်း တဖက်ကခုံတွင် ဝင်ထိုင်ရလေသည်။ သူမအနေနဲ့ ကားကိုဂ ရုစိုက်ပြီးမောင်းနေရသည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် သူမမျက် လုံးက ဖောင်းကြွနေသော မင်းခန့်၏ဘောင်းဘီဂွကြားနေရာ သို့ မကြာခဏရောက်နေသဖြင့် သူမစိတ်တွေမငြိမ်သက်ဘဲ လှုပ်ရှားနေသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ တလမ်းလုံး သူမရော မင်းခန့်ပါ စကားမပြောဖြစ်ကြတော့ဘဲ တိတ်ဆိတ်မှုကသာုကြီးစိုးနေခဲ့သည်။ အိမ်သို့ရောက်သောအခါ မင်းခန့်က သူ၏ အဝတ်အိတ်တွေကို သူမအခန်းထဲသို့ထည့်လိုက်ရင်း
ဟု ပြောလာသည်။ ထိုအခါ သူမက အလိုက်သိစွာဖြင့် ပြုံးလိုက်ရင်း
ဟု ပြန်ပြောလိုက်ရင်း ဘီယာဝိုင်းကို ပြင်ဆင်လိုက်သည်။ ထို့ နောက် သူမပါအတူ ရောသောက်လာမိရင်း သူမတယောက်ထဲ ဘီယာ ၃ ပုလင်းအထိ ကုန်သွားသည်။ သူမအနေနဲ့ဆိုလျှင် သောက်နေကျထက်ပိုများနေပြီဖြစ်သော်လည်း နောက်တ ခွက်ကမ်းပေးလာသော ခွက်ကို မငြင်းဆန်ဘဲယူလိုက်သည်။ ထိုခွက်တဝက်သောက်ပြီးသောအခါ သူမက
“မင်းခန့် ငါသောက်တာ တအားများနေပြီ”
ဟု ပြောလိုက်သောအခါ မင်းခန့်က သူ၏လက်ညိုးကို သူမ၏နှုတ်ခမ်းအပေါ်သို့ ကန့်လန့်ဖြတ်တင်လိုက်ပြီး
ဟု ဆက်မပြောစေရန်လုပ်လိုက်ပြီး သူ၏နှုတ်ခမ်အစုံကို သူ မ၏နှုတ်ခမ်းအစုံပေါ်သို့ ဖိကာ နမ်းလိုက်သည်။ ထိုအခါ သူမ ၏စိတ်တွေလွတ်ထွက်သွားပြီး မင်းခန့်၏အနမ်းတွေကို စိတ်ပါလက်ပါဖြင့် တုံ့ပြန်ပေးလိုက်မိသည်။ ထိုနောက် မင်းခန့်လက်ချောင်းတွေက သူမ၏ ဒူးဖုံးရုံသာရှည်သော စကတ်အောက်ကနေ တိုးဝင်လာခဲ့ပြီး သူမ၏ပင်တီဘေးကြား ကနေ သူမစောက်ပတ်အပေါ်သို့ ရောက်လာခဲ့သည်။ ထိုအခါ သူမက
ငါ…… ငါတို့… …. ”
မင်းခန့်၏လက်တွေက စိတ်လှုပ်ရှားမှုကြောင့် အရည်စို့နေ သော သူမ၏စောက်ပတ်ပေါ်တွင် ငြင်သာစွာပွတ်ဆွဲလိုက်ပြီ နောက်
ဟုပြောရင်း သူမစောက်ပတ်တခုလုံးကို သူ့လက်တွေဖြင့် ပွတ် သပ်နေသဖြင့် သူမပါးစပ်ကနေ စကားသံအစား ငြီးသံအချို့ သာ ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပြီး သူမရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကလည်း မင်းခန့်၏ ရင်ခွင်ထဲသို့ ယိုင်ကျသွားခဲ့သည်။ မင်းခန့်က သူမကိုသူ၏ရင် ခွင်ထဲသို့ ဆွဲသွင်းထားပြီ သူမစောက်ပတ်ပေါ် အဆက်မပြတ် ပွတ်ဆွဲနေသည်။ သူမ၏စိတ်တို့ ဆောင်တည်ရာမရဘဲ ဖြစ် သွားခဲ့ပြီးနောက် သူမလက်တို့က မင်းခန့်ဘောင်းဘီဇစ်ကိုဖွင့်၊ မင်းခန့်လီးကို အတွင်းခံထဲကနေထုတ်ပြီး ညင်သာစွာထုပေး လိုက်သည်။ မင်းခန့်မျက်နှာက ပြုံးဖြီးဖြီးဖြင့် သူမကိုကြည့် နေသဖြင့် သူမရဲ့ညို့အားပြင်းထန်သော မျက်စောင်းလှလှ လေးတချက်ဖြင့် တုံ့ပြန်လိုက်ပြီး မင်းခန့်ဘောင်းဘီကို လုံးဝချွတ်ပေးလိုက်သည်။ ထို့နောက် သူမ၏ အင်္ကျံနဲ့ဘရာစီ ယာကို ချွတ်လိုက်ပြီးနောက် တဆတ်ဆတ်နှင့် တောင်မတ်နေ သော မင်းခန့်လီးကြီးကို သူမရဲ့ဖွံ့ထွားပြီး နုညံ့ချောမွတ်နေ သော နို့နှစ်လုံးကြားထည့်ကာ အပေါ် အောက် ပွတ်လိုက်ပေး လိုက်သည်။ ထိုအခါ မင်းခန့်ရဲ့ခေါင်းက ဆိုဖာနောက်မှီပေါ် သို့ လန်ကျသွားခဲ့ပြီး ပါးစပ်ကလည်း
ဟု ဝါးတဝါးငြီးငြူလာခဲ့လေသည်။ ထို့နောက် သူမက ပွတ်တိုက်နေသောအရှိန်ကို တဖြေးဖြေးမြင့်လိုက်သည်။ ထို့နောက် မြန်သထက်မြန်အောင် ကြိုးစားလိုက်သောအခါ လီးကြီးထိတ်တွင် အရည်ကြည်စထွက်လာခဲ့သည်။ သူမက ထိုအရည်ကြည်ကို လျှာဖြင့် သိမ်းယက်ပြစ်လိုက်ပြီး ထိတ်ဖူးကြီးတခုလုံးကိုပါ လျှာဖြင့်ယက်ပေးလိုက်သည်။ ထို အခါ သူ၏ပါးစပ်က
ဟု ပြောလာသဖြင့် သူမ၏ညို့မျက်ဝန်းတွေဖြင့် မင်းခန့်ရဲ့ မျက်နှာကို မော့ကြည့်လိုက်သည်။ ထို့နောက် တချက်ပြုံး လိုက်ပြီးနောက် မင်းခန့်၏လီးက ထိတ်ဖူးကြီးတခုလုံးကို သူ မပါးစပ်ထဲသွင်းကာ ငုံထားလိုက်သည်။ ထိုအခါ သူက
ဟု ငြီးငြူလိုက်သဖြင့် သူမက ပါးစပ်ထဲကလီးကိုပြန်ထုတ်ပြီး သူ၏ကိုယ်ပေါ်သို့ တက်ပြီးခွထိုင်လိုက်ကာ သူမ၏ပေါင်ခွဆုံ နှင့် သူ၏ထောင်မတ်နေသောလီးကို ပွတ်ကာဆွဲကာဖြင့်လုပ် လိုက်သည်။ သူမတွင် ပင်တီပါရှိနေသေးသော်လည်း သူမရဲ့ ခ့စားချက်တွေကတော့ ကောင်းလွန်းနေပြီး သတိလက်လွတ် ဖြစ်နေမိသည်။ ထိုအချိန်တွင် မင်းခန့်လက်တွေက သူမ၏ပင် တီကို ဆွဲချွတ်လိုက်သဖြင့်………….
ထိုအချိန်တွင် မင်းခန့်ရဲ့လက်တွေက သူမရဲ့ပင်တီကို ဆွဲချွတ် လိုက်သဖြင့် သူမ၏ဖင်ကိုကြွပေးလိုက်သည်။ ထို့နောက် သူမ ၏စကတ်ကို ခါးပေါ်အထိလှန်တင်လိုက်ပြီး သူမရဲ့မောင်လေး ရဲ့တောင်မတ်နေသောလီးကြီးကို သူမစောက်ပတ်အဝတွင် တေ့ပြီး တအိအိဖြင့် ထိုင်ချလိုက်သည်။ မာကျောတောင်မတ် နေသောလီးကြီးက သူမစောက်ပတ်ကြားထဲသို့ ထိုးခွဲဝင် ရောက်လာခဲ့သည်မှာ အတွေ့အကြုံရှိနေပြီးသားဖြစ်သော အိမ်ထောင်သည်သူမပင် အသားတွေတုန်လာသည်အထိ ခံစား ရလေသည်။ သူမအနေနဲ့ ကလေးမမွေးဖူးသည်ကလွဲပြီး သူမ ခင်ပွန်းနှင့် မရည်မတွက်နိုင်အောင် ဆက်ဆံခဲ့ပြီးသားဖြစ်သော် လည်း ယခုမူ သူမ၏မောင်အရင်းခေါက်ခေါက်နှင့်ဖြစ်နေသ ဖြင့် စိတ်အရမ်းလှုပ်ရှားနေရမှုနှင့်အတူ သူမရဲ့ဖင်ကိုကြွကာ ဖိချကာဖြင့် အဆက်မပြတ် လှုပ်ရှားနေလိုက်မိသည်။ထိုအခါ မင်းခန့်က သူ၏လက်အစုံဖြင့် သူမ၏ခါးကိုဆုပ်က်ိုင်ကာ သူ့ လီးအပေါ်သို့ ဆောင့်ချပေးသလိုလုပ်ပေးလာသဖြင့် သူ့လီးနဲ့ သူမ၏စောက်စေ့တို့က ထိလိုက် မထိလိုက်ဖြင့် ကလူကျီစယ် နေသလို ဖြစ်နေသည့်အတွက် သူမစိတ်ထဲ အလွန်တောင့်တ သလို ဖြစ်လာခဲ့ရသည်။
ထိုအချိန်တွင် အိမ်အရှေ့တံခါးမှာ ရုတ်တရက်ပွင့်လာခဲ့ပြီး သူမ၏ခင်ပွန်းဖြစ်သူ ကိုအောင်လွင်တယောက် အိမ်ထဲသို့ဝင် လာပြီး အိမ်ထဲကအခြေအနေကြောင့် ကျောက်ရုပ်တရုပ်ပမာ မလှုပ်မယှက်ငြိမ်သက်သွားခဲ့လေသည်။ ထို့နောင်တွင် သူမ ခင်ပွန်းသည်ကိုအောင်လွင်က
ဒါ ဒါက ဘာ ဘယ်လို ဟာကွာ”
ဟု အံသြမှု မယုံကြည်နိုင်မှုတို့ဖြင့် ကြိတ်မနိုင်ခဲမရဖြင့် တဝက်တပျက်သောစကားကိုဆိုလိုက်ပြီး ချာခနဲ့လှည့်ထွက် သွားလေသည်။ ထိုအချိန်ကျမှ သူမရဲ့အသိစိတ်တွေပြန်ဝင် လာခဲ့ပြီး သူမစောက်ပတ်ထဲ အဆုံးအထိဝင်နေသော မင်းခန့် လီးကို ကပျာကယာထုတ် ခါးပေါ်အထိလှန်နေသောစကတ်ကို အလျင်အမြန်ပြန်ချပြီး ပင်တီပင်မဝတ်နိုင်တော့ဘဲ သူမခင် ပွန်းဖြစ်သူနောက်သို့ အပြေးအလွှားလိုက်သွားမိသည်။ နောက် ကိုပြန်လှည့်မကြည့်ဘဲသွားနေသော ကိုအောင်လွင်ရဲ့လက်ကို သူမဖမ်းဆွဲလိုက်သောအခါ ဒေါသမုန်တိုင်းထန်နေသော ကို အောင်လွင်၏လက်က လေထဲမြောက်တက်သွားပြီး သူမပါး ပြင်တဖက်လည်း ပူထူသွားရသည်။
ဒေါသအပြည့်ဖြင့် ရိုက်လိုက်သော အမျိုးသားတယောက်၏ အရှိန်ကို သူမအနေနဲ့ ဘယ်လိုမှခံနိုင်ရည်မရှိဘဲ နောက်ပြန်လဲ ကျသွားခဲ့ရသည်။ ထိုအခါ ကိုအောင်လွင်က
ဟုပြောလိုက်သောအချိန်တွင် ဘောင်းဘီပြန်ဝတ်ထားပြီးသော မင်းခန့်က လဲကျနေသောသူမကို ဆွဲထူဖေးမပေးလာသည်။ ထိုအခြင်းအရာကိုကြည့်ပြီး ကိုအောင်လွင်က
“ကောင်မ နင်နဲ့ငါ မပေါင်းနိုင်တော့ဘူး
ဟုပြောလာသောအချိန်တွင် သူမလည်းဘယ်လိုမှသီးမခံနိုင် တော့ဘဲ
ကျမလိုကောင်မက ရှင့်လိုအကောင်ကို ဂရုစိုက်နေမယ်
ဟု ပြန်လည်ချေပလိုက်ပြီး တဆက်ထဲ
“မနက်ဖြန် ရှင်နဲ့တရားဝင် ကွာရှင်းမယ်”
ဟု ပြောပြီး အိမ်ထဲပြန်ဝင်လာခဲ့လေသည်။ သူမရဲ့နောက်က နေ မင်းခန့်က ထပ်ချပ်မကွာ လိုက်လာခဲ့ပြီး ကိုအောင်လွင်က တော့
ငါကလည်း မင်းလိုသစ္စာမရှိတဲ့မိန်းမကို ဆက်ပေါင်းနေမယ်
ထင်နေသလား မနက်ဖြန်မဟုတ်ဘူး ညနေတင်ဘဲကွာ
ဟုပြောပြီး လှည့်ထွက်သွားလေသည်။ သူမလည်း အိမ်ထဲ ရောင်သောအခါကျမှ ဆိုဖာပေါ်သို့ အရုပ်ကြိုးပြတ် ပြိုလဲကျ သွားခဲ့ရသည်။
ဝမ်းနည်းမှု ၊ ပူဆွေးမှု ၊ ယူကြုံးမရဖြစ်မှုတို့ကြောင့် တရှုံ့ရှုံ ငိုရှိုက်နေသော သူမခန္ဓာကိုယ်လေးကို မင်းခန့်ကပွေ့ဖက်ကာ နှစ်သိမ့်ပေးနေသည်။ ထိုအခါသူမက
ဟုပြောလိုက်သောအခါ သူမပြောစကားကိုဆို ဘယ်တုန်းကမှ မငြင်းဆန်ခဲ့ဖူးသောမင်းခန့်ကလည်း ဘီယာသွားဝယ်ရန် ထွက် သွားလေသည်။ မင်းခန့်ထွက်သွားပြီးနောက် အိမ်ရှိတံခါးများ နှင့် ပြတင်းပေါက်များပါမကျန် အကုန်ပိတ်ပြစ်လိုက်ပြီး သူမ အခန်းထဲသို့ ဝင်လာခဲ့သည်။ သူမအခန်းထဲက ရေချိုးခန်းတွင် မျက်ရည်များကြောင့် ညစ်ပတ်နေသော မျက်နှာကိုဆေးကြော သန့်စင်လိုက်ပြီး ဆံပင်ကိုပါ ဖားလျားချထားလိုက်ပြီးနောက် သူမဝတ်ထားသော အင်္ကျံနှင့်စကတ်ကိုချွတ် လိုက်သည်။ ထို့နောက် အနက်ရောင်ဘရာစီယာနှင့် ပါးလွှာ လွန်သော အနက်ရောင်ပင်တီကို ဝတ်ပြီးချိန်တွင် အိမ်ရှေ့တံ ခါးမှ လူခေါ်ခေါင်းလောင်းအသံနှင့်အတူ
ဟု မင်းခန့်အသံကိုပါ ကြားလိုက်ရသဖြင့် ဘရာစီယာနှင့် ပင် တီဝတ်ထားသည့်အနေအထားအတိုင်း တံခါးသွားဖွင့်ပေး လိုက်သည်။ သူမကိုကြည့်ပြီး မင်းခန့်မျက်နှာက အံ့သြသလို ဖြစ်နေသဖြင့်
ဟုပြောပြီး မင်းခန့်အရှေ့ကနေ လှည့်ထွက်လာခဲ့သည်။ ထို အချိန်တွင် သူမရဲ့တင်ပါးတွေကို မသိမသာလေး ပိုလှုပ်သွား အောင် လျှောက်ပြခဲ့လိုက်သည်။
မင်းခန့်က တံခါးကိုပြန်ပိတ်လိုက်ပြီး ဘီယာပုတင်းတွေကို စား ပွဲပေါ်တင်လိုက်သည်။ ထို့နောက် သူမအနားသို့လျှောက်လာ ပြီး သူမရဲ့မျက်နှာပေါ်မှ ဆံနွယ်တချို့ကို ဖယ်ရှားလိုက်ပြီး
ဟု သူမအလှကို ချီးမွမ်းလာသည်။ ထို့ကြောင့် သူမစိတ်တို့ ပြေလျော့စပြုလာခဲ့ပြီး မပွင့်တပွင့်လေးပြုံးပြလိုက်ရင်း
“ငါ တကယ်ဘဲ လှတာလား?”
ဟု ကျီစယ်သလို ပြန်မေးလိုက်သည်။ထိုအခါ မင်းခန့်ရဲ့လက် က သူမခါးပေါ်ရောက်လာပြီး သူ့ဆီသို့ဆွဲလိုက်သဖြင့် သူမက
“ဟေ့ ဟေ့ ဘာလုပ်မလို့လဲ”
ဟု သဘောကျစွာဖြင့် တခစ်ခစ်ရယ်ရင်း မေးလိုက်သည်။ ထို့
နောက် သူမလက်ဖြင့် မင်းခန့်လက်ကိုဆုပ်ကိုင်လိုက်ပြီး သူမ အိပ်ခန်းထဲသို့ ဆွဲခေါ်လာခဲ့လိုက်သည်။ ထို့နောက် မင်းခန့်ခန္ဓာ ကိုယ်ကို ကုတင်ပေါ်တွန်းလိုက်ရင်း မင်းခန့်အပေါ်ကနေ ခွထိုင် လိုက်သည်။ ထို့နောက်တဆက်ထဲ မင်းခန့်အင်္ကျံကိုချွတ်ပေး လိုက်ရင်း ရင်ဘတ်ပေါ်ကို အနမ်းလေးများ ခြွေချပေးလိုက် သည်။ ထို့နောက် သူမနှုတ်ခမ်းက တဖြေးဖြေး အောက်သို့ လျောဆင်းလာခဲ့ပြီး ဗိုက်သားအပေါ်ရောက်လာချိ်န်တွင် မင်းခန့်က
ဟု မေးလာသဖြင့် သူမကသူ၏ဘောင်းဘီကြယ်သီးနှင့် ဇစ်ကို ဖြုတ်လိုက်ပြီး အတွင်းခံပါ တပါထဲဆွဲချွတ်ပေးလိုက်ရင်း
ငါက ကိုအောင်လွင့်ကို နင့်ကြောင့်ဘဲ ကွာဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တာ
ဟုပြောပြီး သူ၏လီးကိုအဖျားကနေအရင်းအထိ အစုန်အဆန် လျှာဖြင့်ယက်ပေးလိုက်ပြီးနောက် ထိတ်ဖူးကြီးကိုပါ လျှာဖြင့် ကလိပေးလိုက်သောအခါ မင်းခန့်က
ဟုပြောပြီး ကုတင်ပေါ်မှထလာသည်။ ထို့နောက် သူမရဲ့ဘရာ စီယာကိုချိတ်ကို ဖြုတ်ပေးလိုက်ပြီးနောက် သူမခန္ဓာကိုယ်ကို ကုတင်ပေါ်သို့ ညင်သာစွာ တွန်းလှဲလိုက်သည်။ ထို့နောက် သူ မရဲ့ဖွံ့ထွားလှပနေသော နို့တလုံးကိုနမ်းလိုက်ပြီး နို့သီးခေါင်း ကိုပါးစပ်ထဲထည့်ကာ တပြွတ်ပြွတ်အသံမြည်အောင် စို့နေ လေသည်။
မင်းခန့်က သူမရဲ့ညာဘက်နို့ကိုစို့ပေးနေပြီး သူ့လက်က သူမရဲ့ ဘယ်ဘက်နို့ကို ဆုပ်ကိုင်ကာ နယ်နေလေသည်။ မင်းခန့်က သူ မရဲ့နို့သီးခေါင်းကို ညင်သာစွာကိုက်ပြီး ကျိတ်ခြေလိုက်သဖြင့် သူမကျောရိုးတလျှောက် ဖျင်းခနဲ့ခံစားလိုက်ရပြီး သူမလက် မောင်းတွေက မင်းခန့်ခေါင်းကို ပွေ့ဖက်ထားလိုက်မိသည်။ ထို့ နောက်သူမက
“ငါက နင့်သားဆို နင်အမြဲနို့တိုက်မှာလား”
ဟု ပြန်မေးလာသဖြင့် သူမက
“ငါ့သားကို ငါကနို့မတိုက်ရင် ဘယ်သူကလာတိုက်မှာလဲဟဲ့”
ဟု ပြန်ပြောလိုက်သည်။ ထိုအချိန်တွင် မင်းခန့်က သူမနို့ကို ဆုပ်နယ်နေသောလက်ကိုလွတ်လိုက်ပြီး သူမစောက်ပတ်ပေါ် တင်လိုက်သည်။ သူ့လက်က သူမစောက်ပတ်ကို ပင်တီအပေါ် ကနေ ပွတ်သပ်လိုက်ပြီး
ဟုခေါ်ကာ နို့ကိုအငမ်းမရဖြင့် စို့နေပြန်သည်။ မင်းခန့်ပါးစပ်က ခေါ်လိုက်သော “အမေ “ဆိုသောစကားကြောင့် သူမရဲ့စောက် ပတ်မှာ ရွတက်လာပြီး စောက်ရည်များပင် စို့လာခဲ့ရသည်။ ထို့ကြောင့် သူမပါးစပ်ကလည်း
ဟု ပြန်ပြောလိုက်ရင်း မင်းခန့်ခေါင်းကို တင်းကျပ်စွာ ဖက် ထားလိုက်မိသည်။
မင်းခန့်က သူမပင်တီလေးကို သူ့လက်ဖြင့်မပြီး ဘေးတဖက်ကို ကပ်လိုက်ရင်း သူ့လီးကို သူမစောက်ပတ်အဝမှာထောက်ပြီး တေ့ထားလိုက်သည်။ သူမနို့ကိုလွှတ်ပြီး မင်းခန့်ကသူမမျက် နှာကို စေ့စေ့ကြည့်နေရင်း သူ့လီးကို သူမစောက်ပတ်ထဲသို့ အဆုံးအထိ ထိုးသွင်းလိုက်လေသည်။ မင်းခန့်လီးက သူမ စောက်ပတ်ထဲ ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်ဖြင့် လိုးနေစဉ် သူမပေါင် တွေကို တတ်နိုင်သလောက် ကားပေးထားလိုက်သည်။ ထို အခါ မင်းခန့်က
ဟုပြောရင်း ဆောင့်၍ဆောင့်၍လိုးနေသည်။ ထို့ကြောင့် သူမ ရဲ့ခြေခေါက်နှစ်ဖက်ကို မင်းခန့်ခါးမှာ ချိတ်ထားပေးလိုက်ပြီး မငင်းခန့်ရဲ့ဆောင့်ချက်နဲ့အညီ သူမစောက်ပတ်ကြီးကို ကော့ ၍ကော့၍ ခံပေးလိုက်သည်။ ထို့နောက် ဆာလောင်ငတ်မွတ် စွာဖြင့် မင်းခန့်နှုတ်ခမ်းကို သူမနှုတ်ခမ်းဖြင့် အငမ်းမရနမ်းနေ မိသည်။ မင်းခန့်က သူမအနမ်းကို တုံ့ပြန်ပြီးနောက် သူမအပေါ် ကနေ သူ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုကြွလိုက်ပြီး ဒူးထောက်ထိုင်နေသည့်ပုံစံ ဖြင့် သူမနို့အစုံကိုဆွဲပြီး အားရပါးရ ဆောင်းလိုးနေတော့သည် ထို့ကြောင့် သူမဘယ်လိုမှပင် ထိန်းမရတော့ဘဲ
“အ့ အ့ မင်းးးမင်းခန့် အ့ အားးးး
ပြီးးးတော့မယ် မြန်မြန်လေး. အ့ အ့”
ထို့အခါ မင်းခန့်လက်အစုံက သူမခါးကိုဆုပ်ကိုင်လာသဖြင့် သူ မကလည်း ဖင်ကြီးကိုကြွပေးလိုက်ပြီး ခါးကိုပါ ကော့ထားပေး လိုက်သည်။ ထို့ကြောင့် သူမရဲ့ဖောင့်မို့နေသောစောက်ပတ် ကြီးတခုလုံးမှာ လေထဲမြောက်တက်လာခဲ့ပြီး မင်းခန့်လီးက အရှိန်ပြင်းပြင်းဖြင့် ဆောင့်လိုးလာခဲ့သည်။ မင်းခန့်က
ဟု ထပ်ဆင့်ပြောလိုက်သဖြင့် သူမက
ဟု အလိုက်အထိုက်ပြန်ပြောလိုက်ရင်း သူမစောက်ပတ်ထဲ တိုးဝင်လာသောလီးကပါ စောက်ပတ်အတွင်းသားများဖြင့် ညစ်ပေးလိုက်သည်။ ထို့ကြောင့် မင်းခန့်လီးထဲကသုတ် ရည် တွေ သူမစောက်ပတ်ထဲသို့ ပန်းထည့်လိုက်သောအချိန်တွင် သူမတကိုယ်လုံး တဆတ်ဆတ်ဖြင့်တုန်သွားပြီး ကာမပန်းတိုင် သို့ ရောက်ရှိသွားလေသည်။ ထိုအချိန် မင်းခန့်ခန္ဓာကိုယ်မှာ သူမအပေါ်သို့ ပြိုကျလာခဲ့သဖြင့် သူမကဆီးကြိုကာပွေ့ဖက် ရင်း ထိန်းပေးလိုက်ရသည်။ ခဏအကြာတွင် မင်းခန့်က သူမအပေါ်ကနေ ဘေးသို့လိမ့်ဆင်းသွားအပြီး သူမျက်နှာကို ငေးကြည့်နေသဖြင့် သူမလည်း တိတ်ဆိတ်စွာဖြင့် ချစ်ရပါ သော မောင်လေးရဲ့မျက်နှာကို ပြန်လည်ကြည့်နေလိုက်သည်။
ထို့နောက် မင်းခန့်မျက်နှာက တဖြေးဖြေးပြုံးလာသဖြင့် သူမ က
ဟု မေးလိုက်သောအခါ မင်းခန့်က
ဟုပြောရင်း ရယ်ချလိုက်သည်။ ထိုအခါ သူမက
ဟု ဒေါသမပါဘဲ ကြည်နူးမှုအပြည့်ပါသော လေသံလေးဖြင့် မာန်မဲလိုက်သောအခါ မင်းခန့်ခေါင်းက သူမရဲ့နို့ဆီ တိုးကပ် လာရင်း
ဟုဆိုကာ သူမရဲ့နို့သီးခေါင်းကို ပါးစပ်ထဲထည့်ပြီး စို့လာခဲ့ သည်။ သူမက
“ဟယ် ဟဲ့ ဟဲ့
သြော် ငါ့သားလေးကတော့နော် ခ်ခ်ခ်”
My adventure with my little brother ကို ဘာသာပြန်ဆို ထားခြင်းဖြစ်ကြောင်း ရိုးသားစွာ ဝန်ခံရင်း
← မခွဲရက်​မခွာနိုင် နှစသစ်​ကူးရဲ.ရူးမိုက်​မှုများ →
ကျွန်တော်နှင့် ထိုနှစ်ယော... 17 views | by Iv-Incest | under Bro and Sis, Incest, Mom and Son
👨‍👩‍👧 The Art of Incezt 👨... 8 views | by Iv-Incest | under Dad and Daughter, Family, Incest, Mom and Son
ကလေးသဘောပါပဲကွာ...5views | by Iv-Incest | under Bro and Sis, Incest
👨‍👩‍👧 The Art of Incezt 👨...4views | by Iv-Incest | under Dad and Daughter, Family, Incest, Mom and Son
👨‍👩‍👧 The Art of Incezt 👨...4views | by Iv-Incest | under Bro and Sis, Dad and Daughter, Family, Incest, Mom and Son
အကြံကောင်းတဲ့ လဲ့ဖေဖေ ...3views | by Iv-Incest | under Dad and Daughter, Incest
ပထမ သုံးပွင့် တခိုင် R...2views | by Iv-Incest | under Bro and Sis, Incest
လိုချင်ရင်ပြန်တော့ပေးရတယ်...2views | by Iv-Incest | under Incest, Mom and Son
”’ ဘဝတခုရဲ့ က...2views | by Iv-Incest | under Bro and Sis, Dad and Daughter, Family, Incest, Mom and Son
“…တဲပြိုပါစေ&...2views | by Iv-Incest | under Dad and Daughter, Incest, Mom and Son
Bro and Sis (45)
Dad and Daughter (40)
Mom and Son (47)
💞 *** ဟင့်​အင်း *** 💞 May 15, 2019
ခေးချစ်တဲ့ခေးကိုကို May 12, 2019
ကျွန်တော်နှင့် ထိုနှစ်ယောက် – စ\_ဆုံ May 11, 2019
နှစသစ်​ကူးရဲ.ရူးမိုက်​မှုများ May 11, 2019
မောင်လေးနဲ့အတူ – စ\_ဆုံ May 11, 2019
© 2019 Incest Myanmar . Designed by Incest Myanmar